December (6) November (11) October (9) September (7) August (10) July (5) June (14) May (3) April (4) February (3) January (5) CUNTO-YARAANTA Walaaca xirista xeryaha Dhadhaab oo sababay inay arday badan waxbarashada joojiyaan (ERGO) - Go’aanka dowladda Kenya ee xirista xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan saameyn ugu yeeshay Soomaalida qaxootiga ah. Ardayda ayaa ka mid ah dadka uu saameynta ugu dar...
29 JUL 2016 Akhri
Tahriibe dib ugu soo noqday Soomaaliya kaddib markii uu ka soo quustay nolosha Yurub Burhaan Jaamac Maxamed waa 25 jir, 12 bilood ka hor ka tahriibay Garoowe, isagoo safar halis badan uga gudbay badweynta u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga. Kahor inta aysan gaarin Liibiya, isaga iyo ta...
19 JUL 2016 Akhri
Liibaan oo gawaari-dhaqista ka shaqeyn jiray oo iskuulka dib ugu laabtay Liibaan Axmed oo ku nool magaalada Muqdisho, wuxuu ka mid ahaa ardaydii ay ka joogsatay waxbarashada kaddib markii uu xirmay mashruucii aada dugsiyada. Wuxuu kaddib bilaabay ka shaqeynta gawaari-dhaqi...
Dhadhaab: Qaxootiga oo dalbanaya sahay kordhin si ay Soomaaliya ugu noqdaan (ERGO) - Kumannaan qof oo qaxooti Soomaali ah oo iskood u go’aansaday inay dalkooda ku noqdaan ayaa tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014 lagu caawinayay inay noqdaan. Laakiin waxaa jira dad aa...
Qoysas ka soo barakacay fatahaad ka jirta degmada Jilib oo ku dhibaataysan Kismaayo Dadkaan waxay kasoo barakaceen degmooyinka Jilib, Bu’aale iyo Saakow ee gobolka Jubbada dhexe iyo sidoo kale degmada Jamaame iyo deegaanka Kamsuuma oo ka-tirsan gobolka Jubbada Hoose.Waxayna had...